Italian Food Festival – TodayZ
DISCOVER THE TRUE ITALIAN TASTE
Do you really know how the authentic Italian mozzarella is made? Can you recognizeareal pizza at the first bite? Can you distinguish between Tagliatelle and Tortellini? Parma ham and salami? Chianti and Barolo wine?
If you wish to learn more about Italian food and wines, tickle your palate and have fun, please join us on SUNDAY, FEBRUARY 10 at the ITALIAN FOOD FESTIVAL, in the garden of the ITALIAN EMBASSY.
FOOD COUPONS AVAILABLE FOR SALE AT THE EVENT (3000-5000 AND 700 MMK)
È CUCINA – L’OPERA – FRATELLO – CASA MIA – PREMIUM – CELLAR DOOR – IL FORNAIO – ILLY – NWE TA PIN – GOLDEN BROWN – RIGHT FIELD – FRESCO – CAMPARI – CIAO – PLAN BEE – MYANMAR DEAF CHEFS
အီတာလျံချိစ်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ မိုဇာရယ်လာကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ တကယ့်နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ပီဇာကိုရော တစ်ကိုက်စားကြည့်လိုက်တာနဲ့ အတတ်ပြောနိုင်ပါသလား။ တာယာတေလေနဲ့ တော်တယ်လီနီ တို့ဘာကွာခြားသလဲသိပါသလား။ ပါမာဟန်းနဲ့ ဆလာမီကရော ဘာတွေလဲ။ ခီအန်တီနဲ့ နေဘီယိုလိုဝိုင်တွေရော။
အီတာလျံအစားအသောက်နဲ့ ၀ိုင်တွေအကြောင်း သင်သိသလိုလိုနဲ့ မသဲကွဲသေးတဲ့အချက်တွေကို ရှင်းလင်းသဲကွဲသွားချင်ရင်တော့ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၁၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အီတာလျံသံရုံးဥယျာဉ်ထဲမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် အီတာလျံအစားအသောက်ပွဲတော်ကို လာရောက်အားပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
အီတာလျံအရသာတွေနဲ့ထုံလွှမ်းနေတဲ့ တစ်နေ့တာကို သင်နဲ့အတူဖြတ်သန်းဖို့ စောင့်ကြိုနေပါရစေ။